कसले कु ट्यो अमेरीकामा कन्सर्ट गर्दै गर्दा राजेश पायल राई लाई? आयो यस्तो जानकारी (भिडियो हेर्नुहोस्) – List Khabar
Home / मनोरंजन / कसले कु ट्यो अमेरीकामा कन्सर्ट गर्दै गर्दा राजेश पायल राई लाई? आयो यस्तो जानकारी (भिडियो हेर्नुहोस्)
कसले कु ट्यो अमेरीकामा कन्सर्ट गर्दै गर्दा राजेश पायल राई लाई? आयो यस्तो जानकारी (भिडियो हेर्नुहोस्)
admin January 2, 2022 मनोरंजन Leaveacomment 69 Views
चर्चित गायक राजेश पायल राई अहिले अमेरीकामा छन् । उनी अंग्रेजी नयाँ वर्ष सन् २०२२ को अवसरमा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजित कार्यक्रममा भाग लिन त्यहाँ गएका हुन् । उक्त कन्सर्टमा गायक राजेशपायल राई माथि हात-पात भएको भन्दै एक भिडियो टिकटकमा भाइरल भएको थियो । तर अहिले भनिएजस्तो घटना नभएको आयोजकले स्पष्टीकरण दिएको छ ।
आयोजकका अनुसार फ्यानले बारम्बार गायक राईलाई भेट्न खोजेका थिए । तर उनीहरुलाई सुरक्षाकर्मीले रोकेका थिए । त्यसपछि फ्यानहरु झु क्या एर स्टेजमा गएका थिए । उनीहरुले गायक राईले गीत गाइरहेकै अवस्थामा पछाडिबाट अं गा लो हालेका थिए । उक्त घटना नै हात-पात गरेजस्तो देखिएको आयोजकले बताएको छ ।
आयोजकले थप स्पट्रिकरण दिँदै भनेको छ, पछाडिबाट अं गा लो हाल्दा हात पात भएको भन्ने सत्यता होइन । उहाँलाई सुरक्षाकर्मीले कसैलाई माथि उक्लिन नदिँदा युवक उक्लिएका थिए । आयोजकले गायक राईलाई केही नभएको र कसैले त्यस्तो नकारात्मक नसोचिदिन आग्रह गरेको छ। लाखौँ दर्शकको मन मुटुमा बसेका गायक राई सबैको प्यारो भएको पनि आयोजकले बताएको छ ।
फ्यानले आफूलाई पछाडिबाट अचम्म तरिकाले आफूलई अं गा लो हालेपछि गायक राईले भनेका छन्, ‘अगाडिबाट आए ज्वा ला मुखी पनि पचाउँछु तर, पछाडिबाट आउनेलाई स्वागत अनि माया ।’ उक्त कार्यक्रमको आयोजक बुद्ध ट्याक्स एण्ड अकाउन्टिङ रहेको थियो ।
Previous किन दुब्लाए उत्तर कोरीयाली शासक किम जोङ उन? यस्तो रहेछ कारण
Next पुस २५ देखि माघ ९ गतेसम्म बिदा गर्ने निर्णय?